The Grand ဟိုတယ် Minerva ရုံစတုရန်းမီတာ 300 Florence ရဲ့စန်တာမာရီယာ Novella ရထားဘူတာမှ. ပြန်မှဒီအသမိုင်းဆိုင်ရာဟိုတယ်ရက်စွဲများ 19ကြိမ်မြောက် ရာစုနဲ့တစ်ဦးရှိပါတယ် ခေါင်မိုးပေါ် ၏သမိုင်းဝင်စင်တာအပေါ်စီးကျန်ကြွင်းသောအရပ် အီတလီနိုင်ငံ Renaissance မြို့, Florence.
ဤသည်ဟိုတယ်အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားခရီးသွားများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ယဉျကြေးမှု, နှင့် အစာ. ဒါဟာအားလုံးအဓိကဆိုဒ်များကနေမိနစ်အနည်းငယ်ဖွင့်. သင်မှန်သင့်ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးအပြင်ဘက်ကို Santa မာရီယာ Novella တွေ့နိုင်ပါသည်, ရုံတစျခုကီလိုမီတာအတွင်း, သငျသညျကိုလညျးဖလောဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, Piazza della Signoria, ပိုတငျး Vecchio နှင့် Pitti နန်းတော်.
အချို့စျေးဝယ်ရှာဖွေနေ စားရန်သို့မဟုတ်တစ်ကိုက်? စန်း Lorenzo ဈေးကွက်သို့မဟုတ် Sant'Ambrogio စျေးကွက်တစ်ခုအပန်းဖြေလမ်းလျှောက် ယူ. အစာစားဘို့ Buca မာရီယာသို့မဟုတ် Gelateria la Carraia သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သေချာပါစေ.
ဖက်ရှင်မီလန်အတွက်ဂိမ်း၏အမည်ဖြစ်ပါသည် - ဒါရှိရာခေတ်မှီ Tocq ဟိုတယ်ထက်နေဖို့ပိုကောင်း? အဆိုပါဟိုတယ်ကိုအလယ်ပိုင်းမီလန်တွင်တည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျော်ကြားတဲ့မှတစ်ဆင့် Montenapoleone, Castello Sforzesco နှင့် la Scala ပြဇာတ်ရုံ တစ်ဦး 2km အချင်းဝက်အတွင်းအားလုံးများမှာ, အဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုအလွယ်တကူ walkable အောင်. အဆိုပါ Duomo မီလန်လည်းအနီးအနားမှာဖြစ်ပါတယ်, ဝေးမယ့်ကျော် 2km.
အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ UNA ဟိုတယ်၌နာပိုလီ, နေပယ်လ်အတွက်ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိပြီးတစ်ခု authentication ပွနျလညျထူထောငျသမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦး. ဟိုတယ်ဘားကျန်ကြွင်းမှာသောက်ပျော်မွေ့, သော Vesuvius မီးတောင်တစ်ခုအမြင်ရှိပါတယ်. သင်သည်ထိုမြင်ကွင်းကိုမှအနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးယူနိုင်ပါသည် တိုတောင်းသောရထားစီးနင်း ပေါင်ပေနှင့်တောင်ပေါ်မှာ Vesuvius ကြည့်ဖို့.
ဤမျှလောက်များစွာသောမယုံနိုင်စရာသမိုင်းဝင်သောအရပ်တို့ကိုမအနီးအနားမှာရှိပါတယ်, သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ဒါ Naples တစ်ပိုရှည်နေစေ. သငျသညျ Naples ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, စန်တာ Chiara, စန်း Gregorio Armeno, စန်း Lorenzo Maggiore, အမျိုးသားရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်, အဖြစ်သမိုင်းဝင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Duomo လမ်း. သငျသညျကိုပင်နာပိုလီ Sotterranea မှာမြို့အောက်မှာသွားနိုင်ပါတယ်.
The charming NH Collection Roma Palazzo Cinquecento isa5-star beauty is situated close to Rome’s main train station and has views over the gardens and ancient ruins of Mura Serviane. သငျသညျခြေလျင်ထာဝရမြို့ရှာဖွေစူးစမ်းတူသောခံစားရလျှင်, သငျသညျကံရောက်နေ. သင်တို့သည်ဤမျှဦးနိုင်ပါတယ် အများကြီးဆွဲဆောင်မှု ကွာ 2km ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာ: အဆိုပါ Coliseum, စပိန်ခြေလှမ်းများ, Trevi ရေပန်း, အမျိုးသားပြတိုက် ရောမ, Teatro dell'Opera di ရိုးမား, စန်တာမာရီယာ Maggiore, ဘုရား အ Santa Susanna, နှင့်စပိန်ခြေလှမ်းများ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hotels-near-train-stations-in-italy/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / pl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ဘူတာရုံ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား